Harriet Tubman, onye Afrika-American na onye na-akwado ikike ụmụ nwanyị - Afrikhepri Fondation
Black Friday: Nkwalite
Tuzdee, Disemba 1, 2020
Welcome Ụmụ nwanyị AFRICA
Harriet Tubman, onye mmegide maka ikike nke ndị Africa na ndị inyom
Hibata Tubman bụ eleghị anya ndị kasị mma mara nke Underground Railroad “eduzi”. N'ime afọ iri ọ mere njem ụgbọ mmiri iri na itoolu na South wee duru ihe karịrị ndị ohu 19 gaa nnwere onwe, gaa na Free States ma ọ bụ Canada. Na, dika o ji nganga gosi Frederick Douglass otu mgbe, na njem ya nile o nweghi onye furu efu otu onye “ghara ilafu onye ozo”.
Mgbe ọ bụ nwata
A mụrụ Harriet Tubman ohu na Dorchester County, Maryland gburugburu 1820, nke ndị nne na nna ohu, ndị nna nna ya bụ ndị agbụrụ dị ọcha n'Africa, aha ọmụmụ ya bụ Araminta Ross. Ya na nne nne ya biri nke nwata na-etolite na-arụ ọrụ. Mgbe ọ dị afọ ise ma ọ bụ isii, onye nkuzi ya bụ Edward Brodas binyere ya di na nwunye ebe ọ na-arụ ọrụ ịkwa akwa, a na-akụkarị ya ihe. Ntakịrị ka e mesịrị, ọ na-esetị ọnyà oke. A chụpụrụ ya, ọ bụ onye ọrụ ụlọ na onye na-elekọta ụlọ. Dị ka a na-eme n’ubi ndị ahụ, mgbe ọ dị afọ iri na otu, ọ malitere iyi uwe a na-acha ọbara ọbara iji gosi na ọ bụghịzi nwata. Mgbe ọ dị afọ iri na abụọ, ọ kpọrọ aha nne ya, Harriet. N’ihi ya, e zigara ya ịrụ ọrụ n’ọhịa. Ọ ka dị afọ iri na ụma mgbe ọ merụrụ ahụ nke ga-eso ya n'oge ndụ ya niile. Onye ochichi na-acha ọcha nke iwe ji ụkwụ manye ya isi n'ihi ịjụ inyere ya aka ịkwụsị nwoke na-achọ ịgbapụ.
Alụmdi na nwunye ya
N'ihe dị ka 1844 ọ lụrụ onye Amerịka onye Amerịka aha ya bụ John Tubman onye na-ekwenyeghị nrọ ya. Ebe ọ bụ ohu, ọ maara na ohere ga-adị maka ire ya na alụm di na nwunye ya bụ nsogbu. Harriet rọrọ nrọ ịga ebe ugwu. N'ebe ahụ, ọ nwere ike ịnwe onwe ya ma ọ gaghị echegbu onwe ya banyere ịgba alụkwaghịm nke ọdịnala maka ndị ohu. Ma John achọghị ka ọ gaa n'ebe ugwu. O kwuru na ọ dị mma ebe ọ nọ na enweghị ihe mere ọ ga-eji gawa ugwu. Jọn achọghịkwa ka ọ gaa n’ebe ugwu. Ọ tụrụ egwu ịkatọ ya nna ya ukwu. Ma na-ege ntị naanị maka mkpa ọ nwere maka nnwere onwe, ọ hapụrụ di ya ma gbaga Philadelphia.
Ụzọ mgbapụ ya
Na 1849, na-atụ egwu na a ga-ere ya, yana ndị ohu ndị ọzọ na ahịhịa, Harriet Tubman kpebiri ịgbapụ. Ọ hapụrụ ụkwụ n’otu abalị. Site n'enyemaka enyi nwanyị nke otu nwanyị ọcha, ọ chọtara ụlọ mbụ ya n'ụzọ nke nnwere onwe. N’ụlọ nke mbụ ọ kwọ ụgbọ ala, zoro n’okpuru akpa, na ụzọ ebe ọ na-aga. Ọ hụrụ ndị dị mma iji tụọ ya ebe ọ ga - aga iji nyere ya aka ka ọ gafere Mason-Dixon Line (ókè dị n’agbata Free States na Slave States). Mgbe ahụ, ya na otu nwanyị na di ya na-agafe. Ha bụ ndị nhichapụ ma kpọga ya na Filadelfia. N'ebe ahụ, ọ chọtara ọrụ ma debe ego ya iji nyere ndị ohu ndị ọzọ aka. N'ebe ahụ ọ zutere William Still (1821-1902) onye bụ otu n'ime ike dị ike nke ụzọ ụgbọ oloko.
Sill bụ onye ojii amụrụ n'efu na Pennsylvania nwere ike ịgụ na ide. O jiri talent ya jụọ ndị ohu ajụjụ n'ụzọ na-agbanwe ma degharịa aha ha na akụkọ ha n'akwụkwọ. N'agbanyeghị nke ahụ bipụtara akwụkwọ ya na 1872 n'okpuru aha: "Undergbọ okporo ígwè n'okpuru ala" nke ọ na-akọwa mbọ nke Harriet Tubman. A ka na-ebipụta ya taa.
Na 1850, site na enyemaka nke W. N'agbanyeghị nke ahụ, o nyeere ndị ohu mbụ ya aka ịgbaga ebe ugwu. O zigara ọkpara nwanne ya nwanyị ozi ka ọ gwa ha ka ha banye ụgbọ mmiri na-egbu azụ na Cambridge. Boatgbọ mmiri a ga-akpọrọ ha Chesapeake Bay ebe Harriet na-eche ha na Bodkin Popint. Mgbe ahụ Harriet duuru ha na Filadelfia.
Ihe ịga nke ọma ya na ihe omume ya bụ n'ụzọ dị ukwuu n'ihi ọgụgụ isi ya, ezi uche, obi ike na obi ọjọọ, nke o tinyere na ọrụ nke atụmatụ dị mma maka njem ya. Ọ tụkwasịrị obi na obodo ojii nwere njikọ siri ike iji nyere aka kpọlata ezinụlọ ya na ndị enyi ya n'oge ọtụtụ n'ime ọrụ ya na Maryland. Ọ kpachara anya ka ọ ghara ịkpọtụrụ ndị ya na kọntaktị na nso osisi ndị ha kwesịrị isi na ha gbanahụ: o zigara ha ozi, ka ha wee zute ya n'ebe nzuzo. Ọ maara nke ọma na ngbanwe. N'otu oge, o lere anya n'iji ọkụkọ abụọ. O mere na ọ chere na ọ nọ n'ihe ize ndụ, mgbe ọ fọrọ nke nta ka ọ zute ihu nna ya ukwu. Mgbe ahụ ọ hapụrụ ọkụkọ ndị ahụ, ma bido na-agba ọsọ n’azụ iji jide ha. Nna-ukwu a masịrị ya, onye na-amaghị na dinta na-eme ihe n'eziokwu bụ n'eziokwu, onye ohi aghụghọ.
N'otu oge, n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè, ọ chọpụtara na ndị na-achụ nta ohu gbapụrụ agbapụ na-ele ụgbọ oloko na-aga n'ebe ugwu, na-enwe olileanya ijide ya na ebubo ya. N'egbughị oge, ọ banyere otu ụgbọ oloko na-aga South, na-ekwukwa nke ọma na ndị na-achụ ya agaghị atụ anya eziokwu ahụ nwere ike ịdaba n'ókèala ndị iro; emesia ọ maliteghachiri ụzọ a chọrọ isi, site na ebe nchekwa.
N'elu nke a, o nwere ozizi siri ike na, ọ bụrụ na ohu ọ bụla nwere ike ịjụ itinye aka na ebe ọ na-aga na ugwu, onye ọ bụla nke kpebiri ịga n'ebe ugwu, ọ ga-agbanwe n'etiti etiti ga-agbapụ, ya mere zere na ndị na-eme mkpesa nwere ike ịrata ìgwè ahụ. N'ụzọ dị mma, o yiri ka ọ dịghị mkpa ka ọ bịa n'ókè ndị dị otú ahụ.
Ndụ mgbe Agha Amerịka
Mgbe agha ahụ bisịrị, Harriet Tubman ghọrọ onye na-agba mbọ maka ikike ndị Africa America na ụmụ nwanyị. Ọ rụrụ ọrụ ọfụma iji kwalite ihe na-eme ka ụmụ nwanyị na-eme mkpesa. Nye otu nwanyị ọcha nke jụrụ ya ma ọ kwenyere na ụmụ nwanyị kwesịrị inwe ntuli aka ahụ, ọ zara na ya "atala ahụhụ nke ukwuu ikwere ya" 50. Tubman buru ụzọ gaa nzukọ nke nzukọ ndị na-eme mkpesa, tupu ya abanye na ụmụ nwanyị dịka Susan B. Anthony na Emily Howland. Ọ gara New York, Boston na Washington ịga nzukọ na-akwalite ikike ụmụ nwanyị. Arụmụka ya gosipụtara iji gosipụta na ụmụ nwanyị kwesịrị ịnweta ikike ndọrọ ndọrọ ọchịchị site n'omume ha. O gosipụtara isi okwu ya site na ịkọwa ihe ọ mere n'oge na mgbe Agha Obodo gasịrị ma gosipụta ịchụ àjà nke ọtụtụ ụmụ nwanyị na-arụrụ mba America ọrụ;
N'ihi Sarah Bradford, onye na-eje ozi dịka onye na-ede akụkọ ndụ ma kọwaa akụkọ ya, ọ hụrụ akụkọ ndụ ya bipụtara na 1869 n'okpuru akwụkwọ bụ Scenes of Life nke Harriet Tubman dere (Scenes in the Life of Harriet Tubman).
Enyere ya aha na Women'slọ Nzukọ Mba nke Women'smụaka.
Harriet Tubman: Akụkọ ndu (Bekee Bekee)
1 ọhụrụ site na .2,99 XNUMX
Zụta € 2,99
Emelitere ikpeazụ na November 30, 2020 9:28 am
Atiya Ụmụ nwanyị AFRICA
Nwa ojii - Poemeri nke Brigitte Winbi dere
Okwukwe Bahá'í na ụkpụrụ nke ialdị Ọsọ
Gaa na kalenda Afrika